Ukuvikelwa komonakalo wendlu kufika ku-$1 million USD kombungazi ngamunye nendlu ngayinye—ngaphandle kwezindleko ezengeziwe.
Kumahhala ekubhukheni ngakunye, ngaso sonke isikhathi.
Noma nini lapho isivakashi senza ukubhukha futhi sihlala endaweni yakho, uvikelwa ngokuzenzakalelayo Isiqinisekiso sethu Sokubuyiselwa.
Kufika esivikelweni somonakalo wendlu esingu-$1 million USD uma kwenzeka usidinga—abekho abanye emkhakheni wezohambo abangakwazi ukusedlula. Sivikela umphakathi wethu.
Sikhona ukukusiza Ngesiqinisekiso sethu Sokubuyiselwa
Sizimisele ukwakha umphakathi ophephile futhi nothenjwayo emhlabeni jikelele. Sihlinzeka ngenkundla yokuthumela imilayezo kanye nethuluzi lesixazululo elixhumeke ku-inthanethi elikuvumela ukuthi uxoxisane nezivakashi nanoma yiziphi izicelo zomonakalo, futhi izivakashi ziphendule. Uma isivakashi singakwazi noma singazimisele ukukhokha, Isiqinisekiso sethu Sokubuyiselwa sihloselwe ukuthi sibe usizo.
Umonakalo endlini yombungazi (ikhaya, iyunithi, amagumbi, impahla)
Indlu ngayinye ye-Airbnb ezweni ngalinye
Izinkokhelo ezenziwe Ngesiqinisekiso sethu Sokubuyiselwa zingaphansiKwemigomo Nemibandela yethu Yesiqinisekiso Sokubuyiselwa.
Uma kuba khona umonakalo, kuzodingeka ukuthi kuhlinzekwe ngamadokhumenti (zithombe, amarisidi, njjl.) njengengxenye yenqubo yesixazululo. Sicela ubuyekeze Imigomo Nemibandela Yesiqinisekiso Sokubuyiselwa ukuthola imibandela esebenzayo, ukulinganiselwa kanye nokusilela.
Izimangalo zokulimala komuntu kanye nezomonakalo wendlu ezisuka emalungwini angaphandle (lezo zivikelwe I-Host Protection Insurance)
Umonakalo ezindaweni ezihlanganyelwa nabanye zebhilidi elingeyona ingxenye yendlu ngokwayo
Ukheshi kanye nezibambiso
Umonakalo obangelwe isilwane
Umonakalo wendlu ekuhambeni kwesikhathi
Izinto ezithile, ezibandakanya kodwa ezingapheleli kulezi kuphela: ubuciko, izinto zakudala eziyigugu, imfanisha, umcwebo, okhaphethe abayigugu, izinto eziqoqwayo, kanye nezinye izinto kungase kube nokuvikelwa okulinganiselwe nakakhulu ngaphansi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa.
Udinga ukubika umonakalo wendlu?
Siza uxhumane nathi ukuze kubike umonakalo wendlu.
Isiqinisekiso sokubuyiselwa asiyona inqubomgomo yomshuwalense. Ngezinga odinga ngalo ukuvikelwa okwedlula Okwesiqinisekiso Sokubuyiselwa, i-Airbnb ikukhuthaza ngokunamandla ukuthi uthenge umshwalense ozovikela wena kanye nendlu yakho uma kuba khona ukulahleka okubangelwa izivakashi uma kwenzeka ukuthi lokho kulahleka obhekene nakho akukho phakathi nemigomo Yesiqinisekiso Sokubuyiselwa.
Thatha isinyathelo esilandelayo ekutholeni imali eyengeziwe ngekhaya lakho.
Imininingwane eyengeziwe mayelana Nesiqinisekiso Sokubuyiselwa
Isebenza kanjani inqubo?
Yini okufanele ngiyenze ngaphambi kokuthumela isicelo sokukhokha?
Ngisithumela kanjani isicelo sokukhokha?
Kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi isicelo sami siphroseswe?
Ingabe Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sithatha isikhudla somshuwalense wabanikazi bezindlu noma abaqashi? Ingabe siwuhlelo lomshuwalense?
Ingabe likhona inani lesimangalo eliphansi noma eliphakeme?
Ingabe Isiqinisekiso Sokubuyiselwa sibiza imali? Ingabe ikhona iphrimiyamu noma izindleko ezidonswayo?
Umshwalense Wokuvikela Umbungazi
Umshuwalense ongenakho okuyisikweletu ofika ku-$1 million USD wokubhukha ngakunye.
Umshwalense ongenakho okuyisikweletu ofika ku-$1 million USD wokokuzithokozisa okuningi